Xilliga uu furmayo shirka wada-tashiga oo lagu dhawaaqay | KEYDMEDIA ONLINE
Xilliga uu furmayo shirka wada-tashiga oo lagu dhawaaqay
Wakiillada Beesha Caalamka ee Soomaaliya ayaa war ka soo saaray shirka wada tashiga, ee looga arrinsanayo doorashooyinka dalka, xilliga la qabano, iyo goobta lagu qabanayo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ugu horrayn Saaxiibada Caalamku waxa ay soo dhaweeyeen in Madaxda ka qeyb galeysa shirka ay dhamaantood kusoo aruureen Magaalada Muqdisho si uu furmo shirka, waxayna caddeeyeen in shirku ka dhici doono teendhada Afisyooni ee ku taallada eeryada ammaanka ah.
“Saaxiibada Caalamka waxay soo dhaweynayaan imaatinka ka qeyb-galayaasha shir madaxeedka Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Hogaamiyaasha Dowladaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka, kaas oo lagu qaban doono aagga la ilaaliyo ee Gegida Diyaaradaha Caalamiga ah ee Aadan Cadde ee Muqdisho”. ayaa lagu xusay warka kasoo baxay saaxiibada caalamka.
Waxa ay ku dhawaaqeen in shirku furmi doono, 22 Maarso 2021 oo ku beegan birri oo Isniin ah, hoggaamiyaasha Soomaalida waxaa lagu amray in ay heshiiyaan, muujiyaanna doorkooda hoggaamin, isla markaana sii amba-qaadaan soo-jeedintii Gudiga Farsamada ee ku shiray Baydhabo 16kii Febraayo 2021, si loo hirgeliyo hanaanka doorashada ee 17kii Sebtember 2020 lagu heshiiyay.
Wakiillada Beesha Caalamka, waxa ay dhiira galiyeen la-tashiyada lala yeelanayo saamilayda kale ee siyaasadda, ururada bulshada rayidka ah, iyo sharci-dajiyeyaasha.
“Nooma muuqato wax kale oo lagu beddeli karo laguna hirgelin karo hannaanka doorashada ee 17kii Sebtember iyadoo la raacayo jadwal si dhaqso leh u hirgala si loo qabto doorashooyin nabdoon, loo wada dhan yahay, xor, xalaal ah oo lagu kalsoonaan karo.” ayaa lagu yiri warka ka soo baxay UNSOM.
Wakallada Caalamka waxa ay si cad u sheegeen in aysan aqbali doonin, doorasho hal dhinac u xiran, ama kuwo is bar-bar socda, waxay sidoo kale sheegeen in aan la aqbali doonin in Dowadda waqtigu ka dhamaaday ay isku daydo muddo korarsi.
“Saaxiibada caalamku ma taageeri doonaan geedi-socod aan loo dhamayn ama mid barbar-socod ah, ama dadaalo horseedaya kordhinta muddo xileedyadii horay u jiray.”
Madaxda Soomaaliya waxaa la xasuusiyay in ay fursaddan ka faa’iideysataan oo ay gaaraan xal siyaasadeed nabdoon oo horseeda doorashooyin, Saaxiibada caalamku ayaa sidoo kale sheegayin ay sii wadayaan dadaaladooda ku aaddan isku soo dhoweynta saamilayda Soomaaliyeed.
Qoraalkaan waxaa ku saxiixan waddamada kala ah; Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), Belgium, Canada, Denmark, Jabuuti, Masar, Itoobiya, Midowga Yurub (EU), Finland, Faransiiska, Jarmalka, Urur-Goboleedka (IGAD), Ireland, Talyaaniga, Ururka Jaamacadda Carabta (LAS), Holand, Norway, Qadar, Suudaan, Iswiidhan, Iswisarland, Turkey, Ughaanda, Boqortooyada Midowday ee Britain, Dowladda Maraykanka, ee Qaramada Midoobay.